အလံတော်ကို ၊ ဒီလိုမျိုးလေးလည်းချစ်လို့ရပါတယ် ။ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Aha! Jokes, Satire » အလံတော်ကို ၊ ဒီလိုမျိုးလေးလည်းချစ်လို့ရပါတယ် ။
အလံတော်ကို ၊ ဒီလိုမျိုးလေးလည်းချစ်လို့ရပါတယ် ။
Posted by Don Juan Ronald on Nov 30, 2013 in Aha! Jokes, Satire, Creative Writing | 12 comments
တရုတ် ဘိုးတော် တယောက် မဟုတ်သရုပ် တွေ ရေး တော့ မယ် ။
ဤ ပို့စ် သည် လူကြီးများ သာလျှင် ဖတ်ရှု ရန် ပိုမို သင့်လျော် သဖြင့် ၊ ခလေးများ ၊ အမျိုးသမီးများ နှင့် မိမိ ကိုယ် ကို မိမိသူတော်စင် ဟု ယူဆ နေသူ များ ဒီ ပိုစ် ကို ဖတ်ရှု ချင်း အား မ ပေး ပါ ။
မှတ်ချက်။ ။ လူကြီးများ ဟု ဆိုရာ၌ အများ ပြည်သူ များ အား အတင်း အဓ္ဓမ အုပ်ချုပ် ပြီး ၊ အနိုင်ကျင့် နေ သော မိမိ ကိုယ် ကို မိမိ လူကြီးများ ဟုယူဆ နေ သော ပုဂ္ဂိုလ်ကြီး များ ကို ဆို လို ခြင်း မဟုတ် ပါ ၊ Adult များ ကို သာ ဆို လို ချင်း ဖြစ် ပါ သည် ။
အလံတော် နှင့် ပါတ်သက် ၍ ရေး မည့် အ တွက် ၊ ယခု အလံတော် ၄ ခု ကို အရင် ကြည့် ကြ ရ အောင် ။
1921 ခုနှစ် မှစ၍ ယခုလက်ရှိ အထိ သုံးဆွဲ နေသော တရုတ်သမ္မတနိုင်ငံတော် အလံ ။( ယခု ထိုင်ဝမ် နိုင်ငံ )
1947 – 1974 ခုနှစ်များ တွင် သုံးဆွဲ ခဲ့ သော ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော် အလံ ။
1949 ခုနှစ် မှစ၍ ယခုလက်ရှိတိုင် သုံးဆွဲ နေသော တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံတော် အလံ ။
1974 – 1988 ခုနှစ်များ ၏ ပြည်ထောင်စုဆိုရှယ်လစ်သမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် အလံ
1988 – 2010 ခုနှစ်များ ၏ ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော် အလံ ။
အလံတော် ၄ ခု ဆက်စပ် ပုံ များ အကြောင်း ကို မပြော ခင် တခြားဟာ လေး အရင် ပြော ကြ ရ အောင် ။
လန်ဒန် မှ သုတေသီ များ ၏ အဆို အရ ၊ ချောမောလှပ သော အမျိုးသမီး များ ကို အမြဲ ငေးမောကြည့်ရှု တတ် သော ယေင်္ကျား များ သည် အသက် ပိုမို ရှည် သည် ကို လေ့လာ တွေ့ ရှိ ရ ပါ သည် ။
ထို့ကြောင့် ရွာ ထဲ ရှိ အမျိုးသား များ အားလုံး အသက် ပိုမို ရှည်လျား ဖို့ အတွက် ၊ အထူးသဖြင့် စကတ် တိုတို ပေါင်တန်ဖွေးဖွေး ကို ကြိုက်နှစ်သက် တဲ့ ဆရာ ကြီး များ အ တွက် ပုံ အချို့ ကို အရင် တင်ပြ သွား ပါ ရ စေ ။
ပုံ များ အား လုံး မှာ လွန် ခဲ့ သော အောက်တိုဘာလ ၁၀ရက် နေ့ ၊ တရုတ်သမ္မတနိုင်ငံ ( ထိုင်ဝမ်နိုင်ငံ ) ၏ အမျိုးသားနေ့ တွင် ကျင်းပ ခဲ့ သော ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲ များ ထဲ မှ ၊ နာမည် ကျော် အင်္ဂလိပ်စာ ကျူရှင်ဆရာ Mr. Tony Chan ( Mic ကိုင်ထားသူ ) မှ ကမကထပြုလုပ် ကျင်းပ ပေး သည့် “ အလံတော် ကို ချစ် ကြ စို့ ” ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲ ဖြစ် ပါ သည် ။ ( သတိ ။ ။ ပေါင်ဖွေး တိုင်း လည်း မိန်မ ပေါင် မ ဟုတ် )
ပုံ – ၂
ရွာသား များရေ ~~~ စိတ် ပျော် ပြီး ၊ ကလေးမ ရဲ့ ရင်ဘတ် ရှေ့ ဘက် မှာ ဗလာ ဟု မထင် ပါနှင့် ၊ အ ရေးကြီး တဲ့ points တွေ ကို ပလာစတာ နဲ့ သေခြာ စွာ လုံအောင် ကပ် ထား ပြီးသား ပါ ။ ကြွရောက် လာ တဲ့ ဧည့် ပရိတ်သတ် များ ကင်မရာ နဲ့ တဖျဖျ ။
ပုံ – ၃
အခမ်းအနား အနောင်ဆာ က ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲ ရဲ့ rules တွေ ကို ရှင်း ပြ နေ စဉ် ။ ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲ တွင် ကိုယ့်အိုင်ဒီယာဖြင့် ၊ အသစ်အဆန်း ထွင် ပြီး အလံတော် ကို Innovation လုပ် ကာ ၊ ဝတ်စားဆင်ယဉ် ပေး နိုင် မည့် လူ ကို ၊ ပွဲ လာ ပရိသတ် များ မှ မဲ ပေး ရ မှာ ပါ ။
မဲ ပေးပုံပေးနည်း မှာ ဒီ လို ရှိ ပါ သည် ၊ အလံတော်ပုံစံ ဖြင့် ပြု လုပ် ထား သော sticker စာရွက် ကလေး ရှိ ပါ တယ် ၊ ပွဲ လာ ပရိတ်သတ် တွေ က ၎င်း sticker စာရွက်များ ဖြင့် ၊ ကိုယ် သဘော အ ကျ ဆုံး ၊ Idea အကောင်းဆုံး ဟုထင် ရ သော လူ ၏ ကိုယ်ခန္ဓာ ပေါ် တွင် ကပ် ပေး ရ ပါ သည် ၊ ပွဲ အ ပြီး တွင် ကိုယ်ခန္ဓာ ပေါ် တွင် အလံတော် sticker စာရွက် အများ ဆုံး ကပ် ခံ ရ သော သူ သည် ၊ အနိုင် ရ ရှိ သော သူ ဖြစ် ပါ သည် ။
ကလေးမ နှစ်ယောက် ၏ နာမည် များ မှာ ဝဲ ဘက် ကလေးမ ညိုညို တဲ့ ၊ ယာဘက် ကလေးမ အိအိ တဲ့ နော် ။
ပုံ များ အားလုံး ကို ပန်းသီးနေ့စဉ် မှ ကူး ယူ ခဲ့ ပြီး ၊ ပုံ များ ၏ အောက်ဘက် ညာဘက် ဒေါင့် မှာ အနီရောင် ပန်းသီး Logo လေး တွေ တွေ့ ရှိ ရ ပါ သည် ။
တချိန်က ၎င်း သတင်းစာ တွင် ကမ္ဘာ့ အကြီး ဆုံး သော ကြောင်ကြီး တ ကောင် ပါ လာ ရာ ၊ ကျနော် တို့ MG ရွာ မှ သုခမိန် ကြောင်ကြီး ဟုတ်မဟုတ် ၊ email နဲ့ လာ ရောက် comfirm လုပ် ခဲ့ ဘူး သည် ။http://myanmargazette.net/130391
ဘိုးတော် များ သည် သူတို့ ၏ welfares ကို လက်လွတ် မည် မဟုတ် ဘဲ ၊ ကောင်းကောင်း အသုံး ချ ပြီး အရသာ ခံစား နေ ကြ ပြီ ပေါ့ ၊ဘိုးတော် တယောက် က ကောက်ကျစ် သော အပြုံး လေး နဲ့ အလံတော် sticker စာရွက် ကို ခွါ နေ စဉ် ၊ အခြား တယောက် မှာ တော့ အလံတော် sticker စာရွက် ကို ညိုညို ရဲ့ ကိုယ် ပေါ် မှာ ကပ် နေ ပြီ လေ ။
နှာဗူး ဘိုးတော် က တောင်ကုန်း ပေါ်မှာ အလံတော် sticker စာရွက် ကို ကပ် ချင် သော်လည်း ၊ ကလေးမ လေး ညိုညို က ပညာသား ပါပါ နှင့် အသာ လေး ရှောင် ပေး လိုက် တာ နဲ့ နှာဗူး ဘိုးတော် ဟာ အလံတော် sticker စာရွက် ကို တောင်ခြေရင်း မှာ တင် ကပ်ထား လိုက် ရ ပါ တော့ တယ် ။
အထူးသတိ ပေး ချက် ။
မိတ်ဆွေ ညီအကို မောင်နှမ များ ခင်ဗျား ~~~ အထက် ပါ ဓါတ်ပုံ များ ကို မှီဝဲ ပြီး နောက် အောက် ပါ Idiot & foolish မဆင်မခြင် မေးခွန်း များ ဖြင့် ကွန်မန့် ပေး ချင်း သီးခံ ပါ ။
၁ ။ လေးလေး~~ ဘဘ~~ အန်ကယ်~~ အဲဒီ ဘိုးတော် ခင်ဗျား လား ?
၂ ။ တွာကော ~~ ကိုရော်နယ် ~~ ကို ဒွန် ~~ အဲဒီ ဘိုးတော် ခင်ဗျား လား ?
၃ ။ ကိုပေါ်ဦး~~ ဦးပေါ်ဦး~~ Chinese ပေါ်ဦး ~~ အဲဒီ ဘိုးတော် ခင်ဗျား လား ?
စသဖြင့် Idiot & foolish ဖြစ် သော မေးခွန်း များ မေးမြန်းခြင်း အထူး ရှောင်ကြဉ် ပေး ကြ ပါ ရန် ။
အကြောင်းရင်း ရှင်းလင်း ချက် များ မှာ ။
၁ ။ ကျနော် ၏ ဦးခေါင်း ပေါ် တွင် ထူထည်း သော ကြာဇံ နှင့် မြူစွမ် များ ဝေဆာ စွာ ပေါက်ရောက် လျက် ရှိ နေ ပြီး ၊ လူကြီးလူကောင်း များ နှင့် ပညာရှိကြီး များ ၌ သာ ရှိ လေ့ရှိထ ရှိတတ် သော နဖူးပြောင်ထိပ်ကွက် လက္ခဏာ ၊ ကျနော်မျိုး တွင် လုံး ဝ မ ပိုင်ဆိုင် ပါ ကြောင်း ။
၂ ။ ကျနော် သည် အင်တာနက် ကို အလွန်အကျူး ဆွဲလန်း သုံး ဆွဲ သူ ၊ အိမ်တွင်းပုန်း ဘိုးတော် တယောက် ဖြစ်ပါ သည် ၊ ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲ များ ၊ မာစပ်ခ်ျများ ၊ nightclubs များ ၊ pubs များ ၊ kara ok နှင့် ktv များ သို့ သွားရောက် ဖြေဖျော် ခြင်း လုံးဝ ဝါသနာ မပါ ပါ ။( တကယ် ဆိုတော့ မတတ်နိုင် လို့  )
၃ ။ ကျနော် သည် သမာဓိ နှင့် အထူး ပြည့်စုံ လျှက် ရှိ် သော သူတော်စင် စစ်စစ်တယောက် ဖြစ် ပါ သည် ၊ မိမိ ကိုယ်ကို မိမိ သူတော်စင် ဟု ထင် နေ သော သူတော်စင်မျိုး မ ဟုတ်ပါ ၊ ကျနော် သည် သားသမီး ချင်း မစာနာ သော အလုပ် ကို မ လုပ် တတ် ပါ ။
အဓိက အချက် ကတော့
ကျနော့ မှာ လန်ဒန် သုတေသီ များ ၏ ချောမောလှပ သော အမျိုးသမီး များ ကို ကြည့်ရှု သော အသက် ပိုမို ရှည် နည်း ကို သုံးစွဲ လေ့ မရှိပါ ၊ ၎င်း နည်း ထက် ပိုမို ကောင်းမွန် သည့် အသက်ရှည် ဆေးမှီးတို တမျိုး ကို ကျနော် ပိုင်ဆိုင် ထား ပါ သည် ။
၎င်းဆေးမှီးတို ၏ ဖော်မြူလာ ကို ပို့စ် အဆုံး တွင်မိတ်ဆွေ များ အား ဖေါ်ပြ ပေး ပါ မည် ။
ရွာသား များ ရဲ့ felware ကို ထောက်ရှု လျက် Original link ထည့် ပေး လိုက် ပါ သည် ၊ ၎င်း ဝက်ဘ်ဆိုက် ထဲ တွင် “ အလံတော် ကို ချစ် ကြ စို့ ” ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲ ၏ ဗီဒီယို လည်း ကြည့်ရှု လို့ ရ ပါ သည် ။http://www.appledaily.com.tw/realtimenews/article/life/20131010/272875/
တခု တော့ ရှိ တယ် ၊ တစ်ရှူးပေပါ စက္ကူ များကို အသင့် ဆောင် ထားပေး ပါ ၊ နို့မို့ ရင် “ အလံတော် ကို ချစ် ကြ စို့ ” ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲ ၏ ဗီဒီယို ကို ရှုစား ရင်း စီးကျ လာတဲ့ မိမိ ၏ နှာခေါင်း သွေး နှင့် သွား ရည် များ ကိုယ့် အဝတ်အစား တွေကို ပေ ကုန် လိမ့် မယ် ။
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» ♥ ♥ ♥ ««««««««««««««««««««««««««««««
အလံတော် ၄ ခု အ ကြောင်း ကို နဲနဲ ဖြီး ကြ ရ အောင် ။
ရှေးဦးစွာ ၊ တရုတ် အလံ နှစ် ခု ရဲ့ အကြောင်း ကို အရင် ကြည့် မယ် ၊ အရင်ခေတ် ဗမာတွေ က တရုတ်သမ္မတနိုင်ငံ ကို တရုတ်ဖြူ ဟု ခေါ်ဆို ပြီး ။ တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ ကို တရုတ်နီ ဟု ခေါ် ဆို ခဲ့ ဘူး သည် ။ ဗိုလ် လို ဆို ရင် တရုတ်နီကို Comunist China ၊ တရုတ်ဖြူ ကို Free China ဟု ခေါ်ခဲ့ ဘူး သည် ။
အဲဒီ Free China မှာ နေထိုင် တဲ့ လူ တွေ ဟာ ဆိုရှယ်လစ် နိုင်ငံ ( ဗမာပြည်ကြီး အပါအဝင် ) များ တွင် နေထိုင် တဲ့ လူ တွေ ထက် မည်မျှ Free ဖြစ် သလဲ ဆို ရင် ၊ သူ တို့ ဆီ မှာ ၊
ဘယ်လူ ကို မှ ခွေး လို့ မထင် ရဲ ဘဲ ၊ ဘယ် ခွေး ကို မှ လည်း လူ လို့ ထင် ဖို့ မလို ပါ ။
တချို့ လူ ကို ကြောင် လို့ ထင် နိုင် ခွင့် ရှိ ပြီး ၊ တချို့ ကြောင် ကို လည်း လူ လို့ ထင် နိုင် ခွင့် ရှိ ပါ သည် ။
တရုတ်ဖြူအလံတော် နှင့် ဗမာ အလံတော် ဟာ ဆင်တူရိုးမှား ဖြစ် နေ တာ ကို တွေ့ကြ ရ ပါ လိမ့် မည် ၊ ၁၉၄၇ ခုနှစ် ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံ( ဦးနု ခေတ် ) တည်ထောင် ခဲ့ စဉ် ကာလ မှာ　ကမ္ဘာ ပေါ် မှာ နိုင်ငံ ပေါင်း ၇၀ ကျော် ဘဲ ရှိ သေး တယ် ၊ အဘယ် ကြောင့် ဒီ တရုတ်ဖြူအလံတော် နှင့် ဗမာ အလံတော် ဟာ ဒီလောက်တောင် ဆင်တူရိုးမှား ဖြစ် နေ ကြ တာ လဲ ?
ခု ခေတ်လို ကမ္ဘာ ပေါ် မှာ နိုင်ငံ ပေါင်း ၂၀၀ ကျော် ဖြစ် နေ လို့ အလံတော် တွေ ထပ် ရင် ထပ် နိုင် ပါ တယ် ။ အဲဒီ ခေတ် မှာ ဘာ ကြောင့် တရုတ်ဖြူအလံတော် နှင့် ဗမာ အလံတော် ဟာ ဒီ လောက် တောင် ဆင် နေ တာ လဲ ???
တခုခု တော့ တခုခု ဘဲ ။
«««««««««««««««««««««««««««««« ♥ ♥ ♥ »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
ကဲ~ ကဲ~ ပို့စ် အ ဆုံး မ သတ် ခင် ၊ အဲဒီ အသက်ရှည် ဆေးမှီးတို ကို ရွာသား များ အားshare ပေး လိုက် ပါ မည် ။
ဤ အသက်ရှည် ဆေးမှီးတို သည် ကျနော် တဦးတည်း မူပိုင် ဖြစ် ပြီး သာမန် အချိန် ဆို မည်သူ ကို မျှ မ share ပေးပါ ၊ ယခု ရွာသား များ အတွက် ဆို တော့ ဘာဖြစ်ချင်ဖြစ် ၊နောင်ခါလာနောင်ခါဈေး ၊ share ပေး လိုက် တော့ မယ် ။
ဆေးမှီးတို နှင့် ပါတ် သက် ၍ အသုံးပြုနည်း နှင့် သတိပြု ရန် အချက် များ ကို အ နည်းငယ် ရှင်း ပြ ပေး ပါ မည် ။
၁ ။ ဤ ဆေးမှီးတို ကို လူပျို ကြီးများ ၊ တခုလပ်များ ၊ မုဆိုးဖိုများ နှင့် အသုံး မ တည့် ပါ ။
၂ ။ ဤ ဆေးမှီးတို ကို အထက်ဖေါ်ပြ ပါ လှပ သော အမျိုးသမီး များ ကို ကြည့်ရှု သော အသက် ရှည် နည်း နှင့် တွဲ ပြီး တပြိုင်တည်း မသုံး ရ ၊ အကယ်၍ တပြိုင်တည်း သုံး မိ ရင် အသက် ပိုမို မရှည် လာ တဲ့ အပြင် နှာရွက် သာ ပို ရှည် လာ နိုင် သည် ကို တွေ့ မြင် ခံစား ရ ပါ မည် ။ ထို့ ကြောင့် အထူး သတိထား ဂရုစိုက် ပေး ပါ ရန် ။
ဆေးမှီးတို ရဲ့ ဖေါ်မြူလာ က တော့ “ မိန်းမရိုသေ အသက်ရှည် ၊ ပျော်ပျော် နေ သေ ခဲ ” ပါ ဘဲ ဗျို့ ~~~
ကျေးဇူးတင် ပါ သည် ။
အားလုံး ကိုယ်စိတ် နှစ်ဖြာ ကျန်းမာ ရွှင်လန်း ကြ ပါ ပါ စေ ။
ဂလု .. ဂလု .. ကျအု …
မမေးနဲ့လို့ အတိအကျ ဆိုထားကာမှ ပါးစပ်က .. အဲ .. လက်က ယားကျိယားကျိနဲ့
မမေးရယင် သေတော့မယ့် အတိုင်းဗျဲစ် ..
ဒါကြောင့် အသက်တစ်ချောင်း ကယ်တဲ့ အနေတဲ့ မေးခွင့်ပုဘာ …
အောက်ဆုံးက အလံကပ်နေတဲ့ အဖိုးဂျီးဟာ ခညား မဟုတ်လားငင်င်င် …
ဟဲ ဟဲ မမေးနဲ့ဆိုတော့ မမေးတော့ပါဘူး ဘိုးတော်ရယ်…
ဘိုးတော်တို့ တိုင်ဝမ်သားတွေက ကွန်ပလိန့်တော့စိတ်ချရတယ်…
တစ်ခါလေးသွားမိပါတယ် လမ်းပြပုလိပ်ကို ကားရပ်ပြီး ဆင်းကောတာ အပီမို့…
ဟောင်ကောင် ကျောက်စ်ခမျာ ညက်လုံးလေးကလယ်ကလယ်…
လေးစားအပ် သော ဆရာမ သက်နုအေး ခင်ဗျာ ~~~
အဲဒါတွေ က ဒီမိုကရေစီ စနစ် ရဲ့ ဘေးထွက် ပစ္စည်း ( Waste product ) တွေ ၊
နောင် တချိန် ရန်ကုန်မြို့ မှာ မ ဖြစ် နိုင် ဘူး လို့ ပြော လို့ မ ရ ဘူး ၊
လွန် ခဲ့ သော နှစ် ပေါင်း ၄၀ လောက် က ထိုင်ဝမ်နိုင်ငံ မှာ လည်း ဒါ မျိုး လုပ်မယ် ဆို အားလုံး ထောင် ကျ မှာ ။
အဲဒမှာ ထိုင်ဝမ်သား ကိုအောင် တယောက်များ တွေ့မိသေးလား.. အဘဒွန်မ်။
ပြည်ဂျီးမ၊ ဟောင်ကောင်မ၊ ထိုင်ဝမ်မ၊ စင်ကာပူမ၊ မလေးတရုတ်မ၊ အင်ဒိုတရုတ်မ အလံလုပွဲ ဓာတ်ပုံတွေ တင်ပေးပါခင်ဗျာ။ ကူမြူ နစ်တီလုပ်မ ဓာတ်ပုံမရှိလျင် မြစ်ဆုံရေကာတာ စီမံကိန်း ပိုစတာထဲ သုံးဖို့ဆိုပီး ရွာသူ ကြေးမုံဂျီးဆီ အကူအညီ လှမ်းတောင်းကြည့်ပါ။ လက်နဲ့မတို့ဘဲ လျှာတို့မဲပေးရင်ဂေါ ရမလားလည်း သိချဉ်ပါဒယ်..။
သုခမိန် ဆရာကြီးကြောင် ~~~
ဝါသနာ ပါ သာ ချည်း ဘဲ ရွေး ပြီး မ မိန့် နဲ့ လေ ။
တရုတ်ဖြူ အလံ နှင့် မြန်တျန့် အလံ ဘာ ကြောင့် ဒီလောက် တောင် ဆင် နေသ လဲ
အဲ ဒါ ကို နဲနဲ မိန့် ပေး ပါ လား ခင်ဗျာ ။
ဘာပြောကောင်းမလဲ ကိုအလင်းဆက်ရယ် ပုံထဲမှာပါတာထက် အရွယ်စုံ ဆိုဒ်ဆုံတွေ လာကပ်ကြလိမ့်မယ်
အင်း ..ပုံတွေကြည့်ပြီး အသက်ရှည်တော့မှာပဲ ဘိုးတော်ရေ
မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှုထဲ… မိန်းမသားတို့ရဲ့အဲဒီပွိုင့်နေရာတွေက.. ဘုန်းနိမ့်တယ်.. ဘုန်းမြင့်တယ်..ဘုန်းအလယ်အလတ်ကျတယ်..စသဖြင့် ရှော့ခ်ျရှိတော့ကာ…
သဂျီးမင်း က စစ်ကိုင်းမြို့ မှ ကောင်းမှု တော်စေတီ ကို ပြော တာ လား ?
သဂျီးမင်းများ ရှေ့ကို ကြိုမြင်လေအိ..
အမေ့ကို ဒီအကြောင်းလေးပြောပြတော့.. အောင်မယ်လေးဟယ်..အလံကိုတော့ အဲ့လိုလုပ်ရင် ဘုန်းနိမ့်ပါပြီတဲ့…